Tamba sa 'Vakaipa Vakafa' Ash Williams mu 'Skyrim' - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Tamba sa 'Vakaipa Vakafa' Ash Williams mu 'Skyrim'
Tamba sa 'Vakaipa Vakafa' Ash Williams mu 'Skyrim'
by Trey Hilburn III July 20, 2021 900 maonero
Chokwadi tese takatamba Skyrim pane yega yega fomati uye chikuva chinozivikanwa kune vanhu parizvino. Todd Howard naBethesda vakasimbisa chokwadi chekuti Skyrim inozopedzisira yamhanya pane zvese kusanganisira Pong kana kupihwa nguva yakakwana. Ini handisi kunyunyuta iwo mutambo wakanaka. Uyezve, mods dzinonakidza. Iyo inotonhorera mod iyo PC Gamer yakanongedzera, ndiyo inokuona iwe uchitora chinzvimbo che Zvakaipa Vakafa Ash Williams kuburikidza neyako inotevera… uye pamwe chiuru Skyrim kutamba kuburikidza.
Mod yacho inokuona uchitora chinzvimbo cheAsh chakazara necheni uye nezwi. Ndizvozvo, anouya akarongedzwa neese ake akanakisa imwe-liners, izvo zvichave chokwadi kuve newe uchikumbira Skyrim kukupa shuga panopera husiku.
Kuti utambe seAsh iwe unofanirwa kuisa iyo zvakaipa Dead mod uye enda ipapo. Izvo zvakakodzera zvachose kumwe kuiswa kwe Skyrim uye iyo nguva yaingakutorere iwe kushandisa akadaro mod.
Saka, iwe unotii iwe, Screwhead? Uri kuenda kutora iyo Skyrim svetuka semuponesi wedu anodiwa Ash Williams? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Anotya Street director ane hurongwa hukuru hwekuti ungawedzera sei zvinhu zvese. Verenga zvimwe pano.